ဓာတ်ခွဲခန်း & သိပ္ပံအကြောင်းလူသုံးကုန်၊ ပစ္စည်းကိရိယာနှင့်နည်းပညာအကြောင်းဘလော့
နတ်သမီး - Life Sciences ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာပစ္စည်းများပံ့ပိုးပေးသည်
Pipette Tip Refill အတွက် Tip Loader
Urine Test Strips ထုတ်လုပ်နည်း
centrifuge စက်ဟူသည် အဘယ်နည်း။1.1.အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်1.2.ဗဟိုပြုစက်၏အသုံးချပုံများ centrifugal စက်အမျိုးအစားများ .အဓိက centrifuge စက်၏ထူးခြားချက်များ 3.1.Tubular bowl centrifuge3.2.Disc centrifuge3.3.Horizontal centrifuge3.4.Plate. .Mini centrifuge စက် centrifuge စက်၏ တပ်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များ centrifuge စက်အသုံးပြုနည်း centrifuge စက်အသုံးပြုခြင်း ကြိုတင်ကာကွယ်မှု centrifuge စက်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း centrifuge စက်ကို ဘယ်လိုမှာယူရမလဲ? centrifuge စက်ကဘာလဲ။ […]
Urine Test Strips ဆိုတာ ဘာလဲ။
အကြောင်းအရာများ- ဆီးစစ်ခြင်းအကွက်များသည် အဘယ်နည်း၊ ဆီးထဲတွင် မည်သည့် အစိတ်အပိုင်းများကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း ဆီးအမြှောင်းများ ဆီးထဲတွင် စမ်းသပ်ခြင်း ?·Bilirubin ဆီးစမ်းသပ်ခြင်း strips·Creatinine urine test strips·Urobilinogen urine test strips·Ketones urine test strips·Vitamin c ဆီးစစ်ခြင်း strips(Ascorbate urine test strips) · ဂလူးကို့စ် ဆီးစစ်ခြင်း အကွက်များ · ပရိုတင်း ဆီးစစ်ခြင်း အကွက်များ · Microalbumin urine test strips · Leukocytes urine test strips · Red blood cell urine test strips · Urine pH level test strips · ဆီး […]
Specimen Bag ဆိုတာ ဘာလဲ
အကြောင်းအရာ- နမူနာအိတ်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ နမူနာအိတ်ကို ဘာအတွက် အသုံးပြုတာလဲ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းတွင်အသုံးပြုသော နမူနာအိတ်ကို ဆရာဝန်ရုံးများနှင့် ဆေးခန်းများတွင်အသုံးပြုသည့် နမူနာအိတ် နမူနာအိတ်ကို အသုံးပြုရန် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း?နမူနာအိတ်၏ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်၏ ဖိသိပ်ခိုင်ခံ့မှု နမူနာအိတ် အရွယ်အစားများ နမူနာအိတ်ကို အသုံးပြုနည်း ကျော်ကြားသော အမှတ်တံဆိပ်များ [ …]
96 Deep Well Plate ဆိုတာ ဘာလဲ
အကြောင်းအရာများ : 96 ရေတွင်းပန်းကန်ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ၊ 96 ရေတွင်းပန်းကန်ပြား၏ အသုံးချမှု 96 ရေတွင်းပန်းကန်ပြားသည် မည်သည်အတွက် အသုံးပြုသနည်း။ 96 ရေတွင်းပန်းကန်၏ အသုံးချမှုအတိုင်းအတာ 96 နက်နဲသောရေတွင်းပန်းကန်ကို အဏုဇီဝများစိုက်ပျိုးရန်အတွက် မည်သို့အသုံးပြုသနည်း? 96 ရေတွင်းပန်းကန် အမျိုးအစားများ 96 အဝိုင်းရေတွင်းပန်းကန် 96 စတုရန်းနက်သောတွင်းပန်းကန် U-shaped 96 နက် […]
နိဒါန်း Organic ဓာတုဗေဒသည်ကာဘွန်ပါဝင်သောဒြပ်စင်များ၏ဖွဲ့စည်းမှုဂုဏ်သတ္တိများ၊ တုံ့ပြန်မှုများ၊ ပြင်ဆင်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုလေ့လာသည်။ ထို့ကြောင့်အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်စက်ပစ္စည်းများလိုအပ်ခြင်းသည်တုံ့ပြန်မှုများကိုဆောင်ရွက်ရန်နှင့်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအတွက်စူးစမ်းလေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောလက်တွေ့ကျမှုကိုယူဆောင်လာသည်။ မတူညီတဲ့ပစ္စည်းတွေက […]
ဓာတ်ခွဲခန်းတိုင်းတွင်အရေးကြီးအရေးကြီးဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်း ၁၀ မျိုး
ဓာတ်ခွဲခန်းတိုင်းတွင်လုံခြုံစိတ်ချရသောကိရိယာများရှိရမည်။ ဤတွင်ဓာတ်ခွဲခန်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးသုံးပစ္စည်းများအစားထိုးနည်းအချို့ကိုစာရင်းပြုစုသည်။ ခေတ်မီဓာတ်ခွဲခန်းတိုင်းတွင်ဤဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိရိယာများရှိရမည်၊ သို့သော်ကျောင်းပြင်ပနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းအချို့တွင်ဤစက်ပစ္စည်းများမရှိလျှင်၎င်းတို့မရှိလျှင်အခြားနည်းလမ်းများရှိရမည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းရှိလူတိုင်းသည်၎င်းတို့၏တည်နေရာအတိအကျကိုသိသင့်သည်။ […]
A1-519၊ XingGang GuoJi၊ Yingbin လမ်း၊ Huadu၊ Guangzhou၊ China၊ 510810
WhatsApp/WeChat/Mob- +86 133 1286 3972
ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏ Twitter သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏ LinkedIn သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျု့ချန်နယ်ကိုကြည့်ပါ